I-GoCruise & Travel ingxenye yeFred Olsen Travel | E-United Kingdom Franchise | Franchiseek
»Amathuba weFranchise»I-GoCruise & Travel ingxenye yeFred Olsen Travel
I-GoCruise & Travel ingxenye yeFred Olsen Travel
I-GoCruise & Travel isisungulwe iminyaka engaphezu kwengu-17 futhi inikela ngemodeli yebhizinisi enhle ekuvumela ukuthi usethe ibhizinisi lakho lokuhamba kusuka ekunethezekeni kwasekhaya lakho. Sine-ejenti yokuhamba esekwe kulo lonke elase-UK esebenza amabhizinisi aphumelelayo esebenzisa igama leGoCruise & Travel eliphethwe uFred Olsen Travel. Singomunye webhizinisi elenziwa ekhaya elisetha wena nensimu yakho enabantu ababalelwa kwengxenye yesigidi futhi sikusize ukuqhuba ibhizinisi lakho lokuhamba.
KwaGoCruise & Travel ngempela uthola ukuthi umndeni uzizwe, ubudlelwano bethu nabameleli bethu, ukubasiza bakhulise amabhizinisi abo ukuze aphumelele kuyinto esiyiqhamukayo njengebhizinisi. Sigcwele i-ABTA ne-ATOL isibopho sokukunika wena namakhasimende akho ukuvikelwa kwezezimali okudingayo. Ibhizinisi lakho okukhethayo, ungaba nguCean Cruise Specialist, Specialist Specialist, Weddings & Honeymoon Specialist noma umane ukhethe ukuthengisa zonke izinhlobo zamaholide ukuze uvumelane nezidingo zakho zamakhasimende.
Ukulinganisa Ukusebenza Komsebenzi
Ufuna umsebenzi lapho ongachitha khona isikhathi esithe xaxa nomndeni wakho? Ufuna okuthile lapho ungadingi ukuhlala khona ezimotweni nsuku zonke zeviki? Ngabe sekufikile eqophelweni lapho ungafuni ukusebenza khona ngo-9 ekuseni kuze kube uLwesihlanu noma uLwesihlanu, uma usebenza ngezitolo? Le ndima imane nje ithikame wonke amabhokisi, njengoba ukhetha amahora ofisa ukusebenza ngokuphila kwakho.
Qalisa ibhizinisi lakho ngendlela yakho
EGoCruise & Travel asikuniki okuhlosiwe umane uxoxe nathi ngalokho ofuna ukukufeza kanye neqembu lethu labantu esikusizayo futhi esikuxhasayo, ngoba kungumsebenzi wethu ukukuthola lapho. Sikunikeza wonke amathuluzi wokumaketha, imibono nohlelo lokungeniswa oluhle kakhulu ukuze ukwazi ukukhulisa ibhizinisi lakho ukuphumelela. Ungathola imali efinyelela ku-80% yekhomishini futhi unezinkontileka ezingaphezu kuka-300 zezinkontileka ezihamba phambili ezisebenza lapho nenkululeko nokuvumelana nezimo ukuthengisa opharetha wokuvakasha okufisayo, amandla akho abahola makhulu. Akugcini lapho, ungakhohlwa izikhuthazo ozithola kubaqhubi bezokuvakasha, sizokukhokhela lezo ngqo kwi-akhawunti yakho.
Thina ehhovisi elikhulu siyathanda ukuxoxa, ngakho-ke kungani ungasiniki ucingo futhi sixoxe ngezinketho ongazithola. Noma ngabe unolwazi ekuthengiseni amaholide noma cha sinayo inkambo yokungeniswa efanele wena, ukukuqalisa ekuqaleni okusheshayo ngokuqhuba ibhizinisi eliphumelelayo. Ukuthola kabanzi ngaleli thuba elijabulisayo le-franchise, sinikeze indandatho ku-01213 680 089, noma uchofoze ngezansi ukuthola umbuzo.